Ma jeclaan lahayd inaad tijaabiso Linux? Tilmaamaha loogu talagalay dadka xiisaha leh iyo kuwa cusub. | Laga soo bilaabo Linux
Ma jeclaan lahayd inaad tijaabiso Linux? Tilmaamaha loogu talagalay dadka xiisaha leh iyo kuwa cusub.
Perseus | | Lagu taliyay, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Ujeedada ugu weyn ee hagahan ayaa ah in nolosha loo fududeeyo dadka cusub ama xiisaha leh ee doonaya inay ogaadaan waxa ku saabsan Linux, oo aan rajeynayo inay ka caawin karto asxaabteena "Wadada kala guurka" ka hawlgala mid ka mid ah nidaamka kale, isku dayaya in aan si xad dhaaf ah loo isticmaalin jargon in aan si caadi ah ula macaamilno isticmaaleyaasha penguin iyo si looga fogaado in khibraddu ay tahay tan ugu yar "Dhibaato" suurtogal ah;).
Aynu bilowno: D ...
1 Waa maxay Linux?
2 Maxaan ka filan karnaa Linux?
2.1 Ok nin, waad i qancisay, waxaan rabaa inaan tijaabiyo Linux. Sideen u sameeyaa?
2.2 Xulo distro-gaaga:
3 Degso xiriiriyeyaasha
4 Abuur pendrive, xusuusta USB, furaha "bootable" USB
Waa maxay Linux?
Si ballaaran marka loo eego, Linux waa nidaam hawlgal oo lagu soo saaray fikirka barnaamijka bilaashka ah, taas macnaheedu waa: dhammaan koodhkeeda isha si xor ah ayaa loo isticmaali karaa, wax looga beddeli karaa oo loo qaybin karaa. Ahaanshaha softiweer bilaash ah, waajib kuguma aha inaad bixiso liisan si aad u isticmaasho. (Waxaad awoodi doontaa inaad ka saarto baakada ishaada iyo lugtaada, maxaa yeelay markaad isticmaaleyso Linux, mar dambe dib kuu sheegi maayaan "burcad badeed" XD. Adiguna waxaad yeelan doontaa nidaam hawlgal 100% sidaad jeceshahay ama aad u baahan tahay.)
Maxaan ka filan karnaa Linux?
In Linux waxaan ka heli doonnaa dhinacyada soo socda:
Nidaamyada ku saleysan ama laga soo qaatay Unix, sida Linux, waxay leeyihiin a "heerka amniga" aad uga fiican waxa ay ku tashan karaan Windows-ka ama nidaamyada kale ee hawlgalka lahaanshaha (halkan laga bilaabo SO;)). Tani waxay badanaa sabab u tahay xaqiiqda ah in qof kasta oo doonaya uu ogaan karo sida Linux uga dhex shaqeyso gudaha iyo howlaha ay qabato si ay u fuliso shaqooyinka "X" (badanaa tan waxay la xiriirtaa barnaamijyada, kuwaas oo ay jiraan iskaashiyo badan oo aan ku koobnayn oo keliya mashaariicda sida sida Linux, laakiin sidoo kale gacan ka geysanaya ballaarinta codsiyada loo heli karo, tusaale ahaan ciyaaraha, qolalka xafiiska, maqalka / fiidiyowga, iwm.). Sidan oo kale, wax kasta oo ka dhaca gudaha kombiyuutarkaaga waxaa lagu sameeyaa a "hufan", maadaama aysan waxba ka qarin isticmaaleha, sidaas darteed iska ilaalinaysa dhaqdhaqaaqyada saameeya asturnaanta iyo / ama amniga macluumaadkaaga, sida: ururinta qarsoodiga ah ee caadooyinkaaga daalacashada (bogagga internetka ee aad inta badan booqato), macluumaadka aad hayso ku keydsan, xogta shaqsiyeed, helitaanka kombuyutarkaaga meel fog, rakibida maleware (fayrasyada, Trojans, gooryaanka, iwm.), Xatooyada aqoonsiga iyo tabaha kale oo aad u tiro badan: waa u fududahay horumariye kasta inuu awood u yeesho inuu helo noocyadan cilladaha, ka warbixinta ama baabi'inta shaqooyinkan xun ama godadka amniga, sidaas awgeedna gacan ka geysaneysa in Linux ay ka dhigto mid ammaan u ah annaga isticmaaleyaasha ah: D.
Tani macnaheedu maaha inaysan jirin fayrasyo, Trojans ama rootkits Linux, inkasta oo ay jiraan, hadana ficil ahaan way yaryihiin oo dariiqa loo sameeyay Linux darteed, ficilada xun ee ay sameyn karaan waa ku dhowaad. Guud ahaan, laguguma talin karo inaad antivirus ku rakibto Linux, in kastoo ay jiraan kuwa aad u wanaagsan, maadaama badanaa aan loo baahnayn kiisaska badankood. Marka waxaan nafteenna ku badbaadin karnaa dhibaatadan labadaba adeegsadaha iyo maareynta ilaha heerka qalabka (badbaadi RAM tusaale ahaan;)).
Buug-gacmeed ballaaran oo bilaash ah, codsiyo lacag leh iyo kuwa codsanaya tabaruc:
Halkan, waxaan ku hilmaami karnaa qiimaha xad-dhaafka ah ee rukhsadaha barnaamijyada ama codsiyada, keygens, dildilaaca, taxanaha, iwm. Waqtiga aan isticmaali jiray Linux, waligey kuma qasbin inaan bixiyo si aan u isticmaalo midkood, dabcan, had iyo jeer waa ama way fiicnaan laheyd inaad wax ku tabarucdo, qasab maahan lacag, maadaama sidoo kale laga caawin karo kuwa kale siyaabo, sida baahinta / ku-talinta barnaamijka, ka caawinta tarjumaadda luqadaha kale, iwm. (Waxaad dhihi kartaa dhammaan codsiyada aan isticmaalay ama aan isticmaalay waxay ahaayeen bilaash: P)
In Linux waxaan ka heli kala duwanaansho weyn xagga codsiyada, bay'adaha desktop, maareeyayaasha daaqadaha, qaabab xirmo software, iwm. Waxaan haysanaa waxyaabo badan oo aan kala dooran karno, hadba sida aan u kala jecel nahay ama aan u baahan nahay. Aynu eegno tusaalooyinka qaarkood.
Degaanada Desktop iyo Maareeyayaasha Daaqadda:
Si fudud iyo si aanan isugu dayin inaad ku jahwareerto, waxaan kuu sheegayaa in, si guud markaan u hadlo, ay iyagu mas'uul ka yihiin soo bandhigida daaqadaha, sanduuqyada wadahadalka, mawduucyada iyo tilmaamayaasha miiskaaga. Kuwa ugu caansan waa:
<° Sanduuqa Furan
Nota: Waxaa jira kuwa badan oo badan, laakiin waxaan ka hadli doonnaa oo keliya waxyaabaha inta badan la isticmaalo, haddii aad rabto inaad ballaariso aragtidaada iyaga ku saabsan, Wikipedia waa saaxiibkeed;).
Si aad sifiican iila fahanto, mid waliba wuxuu tusaa miiska shaqada si ka qurux badan ama qaab aad u yar, qaar ka mid ah kuwani waxay leeyihiin barnaamijyadooda u gaarka ah sida compressors / decompressors, macaamiisha fariimaha degdega ah, macaamiisha fariimaha, maamulayaasha faylka, iwm. Tani waxay kuxirantahay deegaanka ay doorteen.
Noocyada xirmooyinka software:
Markii aan kaala hadlo qaabab xirmada softiweerka, waxaan isticmaali doonaa isbarbardhig: Windows rakibayaasha barnaamijka (".Exe" ama ".msi"). Sida inbadan oo idinka mid ah ogtahay, feylashaani waxay noo ogolaanayaan inaan ku rakibno barnaamijyada ama barnaamijyada deegaankaas. In Linux sidoo kale waxaa jira faylalkan, kuwa ugu caansan waa ".Deb" y ".Rpm.
Xirmooyinka .deb waxaa loo isticmaalaa asal ahaan ama ku saleysan qaybinta Debiansidee bay noqon karaan Debian, Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Bodhi Linux, Linux Mint, iwm Qaabkani waa kan ugu caansan dhammaan, maadaama sida caadiga ah aad had iyo jeer ka heli doonto xirmada .deb ee barnaamijka ama barnaamijka aad u baahan tahay. Xirmooyinka .pm waxaa loo isticmaalaa asal ahaan ama ku saleysan qaybinta Red Hat, maadaama ay noqon karaan Mandriva, Fedora, PCLinuxOS, CentOS, iwm. Iyagu ma aha oo keliya qaabab xirmo softiweer oo jira, waxaan sidoo kale ka hadli karnaa waxyaabaha ku saabsan .pkg.tar.xz (binaries horay loo sii diyaariyay) kuwo kale, laakiin kuwani waa kiisas gaar ah;).
Faahfaahin kama bixin doono marka la go'aaminayo nooca ka fiican kan kale, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in iyadoo ku xiran hadba qaybinta aad doorato ay ku xirnaan doonto qaabka xirmada barnaamijka aad adeegsan doonto.
Codsiyada ama Barnaamijyada
In Linux waxaa jira codsiyo badan oo laga kala xusho. Codsiyada sida:
<° Maareeyayaasha faylka
<° U dir macaamiisha
<° Macaamiisha fariimaha deg dega ah
<° Dukumiintiga daawadayaasha
<° Qolalka xafiiska
<° Bog furayaasha shabakadda
<° Ciyaartoyda maqalka-muuqaalka ah
<° Daawadeyaasha sawirka
<° Iyo qaar kaloo badan…
Waxaa laga yaabaa inaad isku aragto kiiska inaad heli karto 20 ikhtiyaar oo kala duwan oo sida muuqata qabta isla hawshaas, laakiin waa uun aragti, maadaama mid waliba "Xal baahidayada" si ka duwan, maxaan uga jeedaa? Hagaag, qof kastaa wuxuu ku dooran doonaa hadba dookhooda ama dookhooda.
Waxaa jira tanno badan oo baloogyo ah, fagaareyaal, buugag, wikis, casharro iyo macluumaad had iyo jeer naga saari kara dhibaatada farsamo. Haddii waxaas oo dhami ay shaqeyn waayaan, i aamin aniga marwalba waxaa jiri doona isticmaale Linux ah oo diyaar u ah Iftiin in yar oo jidkaaga ah. Haddii kalese, waxaa jira mid wax walba og (Saint Google), maaddaama aad hubto haddii aad ku xannibto xalka ama dhibaatada, inay hubaal tahay inay iyaduna ku dhacday iyada oo qof kale uu xallin doono.
<° Kuwa aan aadka u baahnayn:
Waxaa jira ciyaaro badan oo aad ku raaxeysan karto waqtiga firaaqada ama mashquulinta.
<° Loogu talagalay SuperGamers:
Waxaan yara gaarnay mowduuc "Xaraashay" dhammaanteenna adeegsada Linux. Si aad u noqoto qof daacad ah, ha fileynin inaad haysato cinwaannada waaweyn ee ciyaarta Linux. Tani waa mawduuc aad u ballaadhan waana mid abuuray doodo waaweyn oo ku saabsan Linux. Sidaa darteed ma doonayo inaan ku taabto tusahan maadaama ay wax badan ka hadlayso. Tan waxaan ula jeedaa inaadan ciyaari karin "waxba". Waxaa jira had iyo jeer siyaabo iyo / ama habab lagu gaaro tan, laakiin si daacadnimo ah ha fileynin inaad hesho khibrad la mid ah tii Windows: S.
Native Windows codsiyada ku shaqeeya Linux:
Si toos ah suurtagal uma ahan in lagu rakibo barnaamijyada Windows-ka ee Linux (tani waa sababta oo ah waa laba nidaam oo hawl gebi ahaanba ka duwan), waxaan dhihi karaa si toos ah maahan, maadaama ay jirto ujeeddadan awgeed, codsi la yiraahdo Khamrigu taas oo u oggolaanaysa in sidan la sameeyo. Xitaa sidaas oo ay tahay, haddii Khamrigu haysto shaqo aad u badan oo la qaban karo (ma awoodo inaan si sax ah u wadno barnaamij cayiman), si fudud ayaan u xallin karnaa Virtualizing Windows in mashiinka dalwaddii (waa wax la mid ah inuu Windows ka dhex socdo Linux, war wanaagsan !!!: D). Maanta waxaa jira codsiyo badan oo ah qaab-dhismeed badan. Tani waxay ka dhigan tahay inay ku ordi karaan labada Windows iyo Linux iyagoon wax dhib ah qabin, kaliya soo dejiso oo ku rakib nooca aad dooratay OS.
Ok nin, waad i qancisay, waxaan rabaa inaan tijaabiyo Linux. Sideen u sameeyaa?
Si loo ogaado qeybinta aan dooran karno, waa inaan tixgelin siino dhinacyada soo socda:
Tani waa muuqaal aad muhiim u ah marka aad go'aan ka gaareyso 'distro' (gaagaaban oo loo qaybiyo;)). Hadaan mashiin leenahay "moodalkii ugu dambeeyay" Waxaan rakibi karnaa ficil ahaan, laakiin haddii kale, waa inaan si aad ah u xulanno qalabka 'distro'. Linux waxay u keentaa darawallo badan aaladahaaga WiFi, kaararka fiidiyowga iyo maqalka, iwm. Laakiin qaybinta oo dhan kuma jiraan iyaga marka loo eego, tan badanaa waxaa ugu wacan laba sababood. Waxaa jira distros aan ku darin iyaga sababo la xiriira dhibaatooyinka shatiyeynta (sababtoo ah waa mulkiile ama software xuquuq leh) ama sababtoo ah aaladuhu waa cusub yihiin.
Adeeg noocee ah ayaan siinaa qalabkayaga?
Waxaan ula jeedaa waa inaan tixgalino haddii aan sida caadiga ah ugu isticmaalno inaan ku dhex marno webka, jawi wax soo saar (hawlo, tafatirka muuqaalka, fiidiyaha, horumarka), iwm. Sababta Waa hagaag, qaybsiyo badan ayaa si toos ah u rakibaya wax kasta oo lagama maarmaan ah markaan dhammeyno rakibidda Linux-ka. Marka, haddii aan rakibno qaybinta ku takhasusay tafatirka maqalka-fiidiyowga, markii rakibidda la dhammeeyo taasi waa dhab ahaan waxa aan heli doonno, codsiyada ujeeddadaas. Laakiin haddii aan kaliya kaaga baahanahay inaad rakibto biraawsar webka iyo processor processor? Waxay noqon laheyd waqti lumis aad u weyn in lagaa ciribtiro wax kasta oo aanan u baahnayn si aan ula qabsano baahiyaheena, sax?
Qaar ka mid ah distros-ka ayaa ka fudud kuwa kale. Tani waa sababta oo ah qaar waxay qaadataa waqti dheeri ah si ay ugu hagaajiyaan 100% qalabkayaga iyo softiweerka mashiinkeena kuwa kale. Haddii aan u baahanahay inaan mashquulinno kumbuyuutarradeena marka rakibaadda Linux ay dhammaato ama haddii aan waqti dheeraad ah u haysanno inaan ku faahfaahinno faahfaahinta iyadoo loo eegayo dhadhankeenna iyo baahiyaheenna. Waxaas oo dhami waxay ku xirnaan doonaan xulashada isticmaalaha.
Macluumaad / Dukumiinti:
In kasta oo ficil ahaan dhammaan qaybinta Linux ay hayaan macluumaad badan, xaaladaha qaarkood waxay kugu kici doontaa qiimo badan inaad ka hesho macluumaad ku saabsan qaybinta X ama Y. Tani waa sidaas, sababtoo ah sida caanka ah ee loo yaqaan 'distro' waa, sida ugu fudud ee aad u heli karto macluumaadka la xiriira, tani ma ahan sharci, laakiin mararka qaarkood way sameysaa.
Qeybinta qaarkood waxay yeelan karaan codsiyo badan (oo lagu rakibi karo dadaal badan) kuwa kale. Tusaale ahaan, qaybinta ku saleysan Debian ayaa sida ugu badan uga faa'iideysata tan marka la barbar dhigo qeybinta kale. Aniga oo ka fogaanaya baahida loo qabo in la soo ururiyo waa inaan soo bandhigaa kuwa laga baqo iyo kuwa la neceb yahay "amarrada arcane" inaad awood u yeelatid inaad ku rakibtid barnaamijka X ee aan ujirin waxyaabaha kugu qasbaya.
Desktop Deegaanka / Maamulaha Daaqada:
Sidii aan horeyba u sharraxay, kuwa mas'uulka ka ah inay na tusaan miiskeena ama jawiga shaqada. Waxay leeyihiin jacaylku wuxuu ka dhashaa aragga, sidaa darteed waxaan kuu daynayaa sawirro qaar oo ah sida miisaskaaga mustaqbalka u ekaan karaan. Dooro midka aad ugu jeceshahay 😉
Nota: Waxaan mar labaad ku nuuxnuuxsanayaa inaysan ahayn dhammaan maareeyayaasha daaqadda ama aagagga desktop-ka ee jira, kaliya waxaan dhigay kuwa ugu caansan.
Wareegga horumarinta qaybinta:
Inta badan qaybinta Linux waxay ku socotaa wareeg horumarineed oo la aasaasay (qaybinta sii deynta wareegga). Tani waxay ka dhigan tahay in wararka ugu muhiimsan ama cusbooneysiinta, iyo sidoo kale astaamaha cusub, la sii daayo waqti ka waqti iyadoo nooc kasta oo cusub ah. Taas macnaheedu maaha mar haddii distro-ga lagu rakibo kombiyuutarkaaga, weligiis lama cusbooneysiin doono. Waa la cusbooneysiin doonaa, inkasta oo si ku-meel-gaadh ah ama kaliya loo cusbooneysiiyo wax muhiimad gaar ah leh. Tani waa in nolosha loo fududeeyo soo-saareyaasha la yiraahdo distro, si ay waqti ugu helaan si ay u tijaabiyaan fulintooda cusub iyo / ama shaqeynaya, sidaas awgeedna looga fogaado in adeegsadayaashu ay la kulmaan wax dhib ah noocyada horumarinta.
Marka la eego qaybinta sida Ubuntu ama laga soo qaatay, wareegtooda cusbooneysiintu waa qiyaastii 6dii biloodba mar. Tani waxay ka dhigan tahay in dhammaadka muddadaas, nooc cusub uu ka muuqdo qaar ama waxyaabo badan oo cusub oo ku dhex jira. Qaybinta kale waqtiga mudadu wuu ku kala duwanaan karaa. Tani macnaheedu maaha inaad rakibayso iyo / ama dib uxirinayso marar badan, sida caadiga ah annaga isticmaaleyaasha ah ee jecel inaan marwalba haysanno nooca ugu dambeeya ee codsiyadayada (kuwa naga mid ah ee ka cabanaya nooca : P). Xusuusnow inaad sidoo kale kusii nagaan karto nooca hadda ee aaladdaada waqti dheer, haddii aad rabto.
Waxa kale oo jira qaybinta oo aan lahayn meerto horumarineed (qaybinta) sii daayo). Qalabkani wuxuu had iyo jeer kuu oggolaanayaa inaad haysato waxa ugu dambeeya ee kombiyuutarkaaga waxaadna hubaal iska ilaabi kartaa shaqada daalka badan ee sugitaanka illaa nooca soo socda si aad u hesho inta ugu badan. Caadi ahaan noocyada noocaan ah laguma taliyo dadka cusub maadaama had iyo jeer si joogto ah loo cusbooneysiiyo waxayna sababi karaan nooc ka mid ah dhibaatada marka la eego xaaladdan, tani waa aragti ahaan (waxa halkaa looga doodayo). Shakhsiyan, waligey dhibaato iguma qabin noocan ah distros-ka, in kastoo dabcan, waxay u baahan tahay inaad wax yar ka ogaato "sidii" iyo "sababta" rakibi ama cusbooneysii barnaamijka X ama Y. Haddii aad ka mid tahay dadka waqtiga leh ee doonaya inay waxyar ka dhex galaan shabakadda si ay xal ugu hesho dib-u-dhac gaar ah, ha ka waaban inaad isticmaasho qaybinta noocan ah.
Adigoon ku sii dheerayn, aan aragno qaybinta faa iidada u leh kooxdaada kuna habboon baahiyahaaga.
Noocyada xirmooyinka software: .deb
Deegaanka Desktop: Gnome - Midnimo
Wareegga horumarka: Siidaynta wareegga
Shuruudaha Qalabka: Dhexdhexaad
Fududeynta adeegsiga / rakibidda: Easy
Deegaanka Desktop: KDE
Deegaanka Desktop: XFCE
Shuruudaha Qalabka: In yar
Deegaanka Desktop: Lxde
Shuruudaha Qalabka: Aad u yar
Qaybinta: Bodhi Linux
Deegaanka Desktop: Nuurin
Qaybinta: Linux Mint
Deegaanka Desktop: Gnome
Qaybinta: Dugsiga hoose
Noocyada xirmooyinka software: .pm
Deegaanka Desktop: Gnome ama KDE
Deegaanka Desktop: Openbox, KDE, XFCE ama LXDE
Wareegga horumarka: Sii deynta wareejinta
Fududeynta adeegsiga / rakibidda: Fudud / Joogto ah
Shuruudaha Qalabka: Altos
Noocyada xirmooyinka software: .pkg.tar.xz (binaries horay loo sii diyaariyay)
Kombiyuutarada leh hal xudun oo ka yar 1 Gigs oo RAM ah:
Toos u soo dejiso:http://us.releases.ubuntu.com//oneiric/ubuntu-11.10-desktop-i386.iso
Torrent (Lagu taliyay):http://releases.ubuntu.com/11.10/ubuntu-11.10-alternate-i386.iso.torrent
Toos u soo dejiso:http://www.kubuntu.org/getkubuntu/download#download-block
Torrent (Lagu taliyay):http://torrent.ubuntu.com/kubuntu/simple/oneiric/desktop/kubuntu-11.10-desktop-i386.iso.torrent
Toos u soo dejiso:http://torrent.ubuntu.com/xubuntu/releases/oneiric/release/desktop/xubuntu-11.10-desktop-i386.iso
Torrent (Lagu taliyay): http://torrent.ubuntu.com/xubuntu/releases/oneiric/release/desktop/xubuntu-11.10-desktop-i386.iso.torrent
Toos u soo dejiso:http://cdimages.ubuntu.com/lubuntu/releases/11.10/release/lubuntu-11.10-desktop-i386.iso
Torrent (Lagu taliyay):http://cdimages.ubuntu.com/lubuntu/releases/11.10/release/lubuntu-11.10-desktop-i386.iso.torrent
Toos u soo dejiso:http://iweb.dl.sourceforge.net/project/bodhilinux/bodhi_1.3.0.iso
Torrent (Lagu taliyay): http://downloads.bodhilinux.com/torrents/bodhi_1.3.0.iso.torrent
Toos u soo dejiso:http://www.linuxmint.com/edition.php?id=94
Torrent (Lagu taliyay):http://torrents.linuxmint.com/torrents/linuxmint-12-gnome-dvd-32bit.iso.torrent
Toos u soo dejiso:http://sourceforge.net/projects/elementaryos/files/elementaryos0.1-jupiter-i386.iso/download
Torrent (Lagu taliyay):http://downloads.elementaryos.org/elementaryos0.1-jupiter-i386.iso.torrent
Toos u soo dejiso:http://www.mageia.org/es/downloads/
Torrent (Lagu taliyay):http://www.mageia.org/es/downloads/
Toos u soo dejiso:http://software.opensuse.org/121/es
Torrent (Lagu taliyay):http://software.opensuse.org/121/es
Toos u soo dejiso:http://www.pclinuxos.com/
Torrent (Lagu taliyay):http://www.pclinuxos.com/
Toos u soo dejiso:http://www.mandriva.com/es/downloads/download.html?product=Mandriva.2011.i586.1.iso
Torrent (Lagu taliyay):http://www.mandriva.com/es/downloads/download.html?product=Mandriva.2011.i586.1.iso&∓torrent=1
Toos u soo dejiso:http://sourceforge.net/projects/chakra/files/2011.12/chakra-2011.12-Edn-i686.iso
Torrent (Lagu taliyay): ?
Kumbuyuutarrada leh 2 ama in ka badan oo ka badan iyo in ka badan 4 Gig oo ku jira RAM:
Toos u soo dejiso:http://de.releases.ubuntu.com//oneiric/ubuntu-11.10-desktop-amd64.iso
Torrent (Lagu taliyay): http://releases.ubuntu.com/11.10/ubuntu-11.10-alternate-amd64.iso.torrent
Torrent (Lagu taliyay): http://torrent.ubuntu.com/kubuntu/simple/oneiric/desktop/kubuntu-11.10-desktop-amd64.iso.torrent
Toos u soo dejiso: http://torrent.ubuntu.com/xubuntu/releases/oneiric/release/desktop/xubuntu-11.10-desktop-amd64.iso
Torrent (Lagu taliyay):http://torrent.ubuntu.com/xubuntu/releases/oneiric/release/desktop/xubuntu-11.10-desktop-amd64.iso.torrent
Toos u soo dejiso:http://cdimages.ubuntu.com/lubuntu/releases/11.10/release/lubuntu-11.10-desktop-amd64.iso
Torrent (Lagu taliyay):http://cdimages.ubuntu.com/lubuntu/releases/11.10/release/lubuntu-11.10-desktop-amd64.iso.torrent
Torrent (Lagu taliyay): http://iweb.dl.sourceforge.net/project/bodhilinux/bodhi_1.3.0.iso
Toos u soo dejiso:http://www.linuxmint.com/edition.php?id=95
Torrent (Lagu taliyay):http://torrents.linuxmint.com/torrents/linuxmint-12-gnome-dvd-64bit.iso.torrent
Toos u soo dejiso:http://sourceforge.net/projects/elementaryos/files/elementaryos0.1-jupiter-amd64.iso/download
Torrent (Lagu taliyay):http://downloads.elementaryos.org/elementaryos0.1-jupiter-amd64.iso.torrent
Toos u soo dejiso:http://www.mandriva.com/es/downloads/download.html?product=Mandriva.2011.x86_64.1.iso
Torrent (Lagu taliyay): http://www.mandriva.com/es/downloads/download.html?product=Mandriva.2011.x86_64.1.iso&torrent=1
Toos u soo dejiso: http://sourceforge.net/projects/chakra/files/2011.12/chakra-2011.12-Edn-x86_64.iso
Marka feylka la soo dejiyo "X.iso" waxaan ku duubi karnaa / ku gubi karnaa CD / DVD (waqtiga duubista, waa inaad doorataa inaad gubto muuqaalka sawirka;)) ama abuuri karto pendrive bootable ah.
Abuur pendrive, xusuusta USB, furaha USB "Kabaha"
Si tan loo sameeyo, waxaan isticmaali karnaa labadan ikhtiyaar.
Fikradayda, tan ugu fudud uguna dhameystiran.
Dhammaan tixraac kiisaskaas.
Tan awgeed, waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno penguin-ka yar.
Inta aynaan ku dhiirran "Isku tuur madaxa" oo rakib Linux waxaan ku siin doonaa talooyinkeyga 😉
Linux waa jawi qariib ah oo inteenna badan aan ku dareemeyno ciirsi la'aan ama u nugul nahay waraabiyo oo aan awoodin inaad gasho facebook hal mar oo dheeri ah ama aad lumiso macluumaadkeena, sax? (Nah xoogaa xarago ah XD) Waxbaan kuu soo jeedinayaa, Linux waxay leedahay qaybisyo badan oo la tijaabin karo iyadoon loo baahnayn inaad ku rakibtid darawalkaaga adag (haddii aadan raacin talooyinka caqliga leh ee miiska qaybinta, ee kor ku xusan: P), wicitaanada LiveCD's. Qeybintaani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku ciyaarto Linux ka badbaadada fadhigaaga, kaliya waa inaad gashaa pendrive / USB, CD ama DVD oo aad shidataa kombiyuutarkaaga BIOS waa in loo qaabeeyaa inay ka soo baxdo CD / DVD ama USB) si aad u tijaabiso. Waxaad kuheli doontaa qalab si buuxda u shaqeeya oo ku shaqeeya qalabkaaga, oo aad isku dayi karto meeshii aad rabto !!! Sow ma ahayn sidaad jeceshahay? Kaliya dib ubixi kombuyutarkaaga oo ka saar CD-gaaga, DVD-gaaga ama USB-gaaga wax walbana si caadi ah ayey kusoo noqon doonaan (wax isbadal ah oo aad ku sameyso Linux-ka saameyn kuma yeelan doonto wixii horeyba uga jiray darawalkaaga adag, ilaa aad riixdo rakibida Linux mooyee, ee ha ka welwelin.; )). Naftaada u hur si aad u tijaabiso ilaa inta aad u aragto inay ku habboon tahay, saacado, maalmo, iwm. Tani waa inaad bilowdo inaad aqoonsato dhulka oo aad barato. Hubi in qalabkaaga oo dhan la aqoonsaday loona isticmaali karo si caadi ah. Isku day codsiyada ay ku timid asal ahaan sida daalacashada shabakadaha, macaamiisha boostada, iwm. Isku day inaad rakibo barnaamijyo cusub ama aad ka saarto kuwa aad u aragto inaysan daruuri ahayn. Marka aad dareento diyaar ama raaxo waad ku rakibi kartaa kombuyuutarkaaga;).
Haddii aad xaqiiqdii dareento inay tahay isbeddel lama filaan ah inaad ka tagto Windows gadaashiisa si aad ugu xirto Linux kumbuyuutarkaaga oo keliya, waxaad yeelan kartaa a Labada kabood ee labiska. Dual Boot waa inuu lahaadaa 2 nidaam oo ka shaqeynaya kombiyuutarkaaga markaad dooraneyso PC-ga aad ku shaqeynayso OS-ka aad rabto inaad ku bilowdo (runti waad heli kartaa wax intaa ka badan, laakiin waxay kuu noqon kartaa mowduuc xoogaa kuu horumarsan)
Waa hagaag saaxiib kani waa bilowgii, weli wax yar baa hadhay si aad si hufan qaar uga heli karto "nooca" Linux kombiyuutarkaaga. Qoraalada dambe waxaan isku dayi doonaa inaan kugu haggo inta lagu guda jiro rakibisteeda (inaan tan la sii samayn: 3). Ilaa waqtiga xiga 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Ma jeclaan lahayd inaad tijaabiso Linux? Tilmaamaha loogu talagalay dadka xiisaha leh iyo kuwa cusub.
Qoraal wanaagsan, hambalyo!
Inta badan Linux waa deegaan qariib ah oo aan dareemi karno ciirsi la'aan ama u nugul waraabinteeda
Juajuajua waa sidaan dareemay markii iigu horaysay ee aan dunidan soo galo oo aan waraabiyo wax kabadan hal jeerna aanan wali samaynaynin hahahaha
Qoraal Cajiib ah, Hambalyo.
Qoraal aad ufiican, aad u dhameystiran isla markaana leh faa iidooyin wax ku ool ah. Aad baad u mahadsan tihiin markasta;)
+1000 Aad u fiican Perseus ^^
Aad u fiican runtii 🙂
Ku soo dhowow saaxiib kooxda ... runtii waa wax lagu farxo in aan ugu dambayntii halkan ku joogo 😀
Salaan kadib waxaan rajeynaynaa inaan kusii wadno aqrintaada 😉
Hanuun aad u wanaagsan oo aad u dhameystiran oo si fiican loo sharaxay. Kaliya waxaan sixi lahaa khaladaadka higaada 😉
Waxa ugu fiican ayaa ah inaan sameeyay dadaal aan dib ugu eego XD, Waad ku mahadsantahay u fiirsashada.
Dabcan, xog la’aan iyo macluumaad wanaagsan awgood, ma ahan inaan u baneyn doono Linux. Waan ka helay, haa mudane, aad u badan.
Aad baad u mahadsantahay @oo dhan : D !!!! (gaar ahaan hurdo la aan | -))… XD
Waad ku mahadsan tahay adiga (@faahfaahsan iyo @KZKG ^ Gaara) aniga oo igu casuumay ka mid noqoshada beeshan weyn oo ii ogolaatay inaan wax u qoro. Iyadoo aan ogayn, waxay samaysteen qoys weyn : - #. Aad ayaan ugu faraxsanahay waxan oo dhan… TT
Dabcan, waxaan sii wadi doonnaa qorista iyo akhriska si aad u badan. Wax walba waa in la wadaago, wax la barto oo loo kobco dad ahaan.
Salaan ... 😉
Hambalyo, ma jiro qof ka fiican qof adeegsada opera inuu ku dhex jiro beeshan 🙂
Waan sii wadaayaa inaan waraabiyo maanta markasta oo aan u waraabiyo si aad ufiican, laakiin ha walwalin, dad yar ayaa kamikaze ah sidaan ahay xD
Ka qayb qaadasho wanaagsan
Aad u fiican maqaalkaaga, Waxaan jeclaa: D. Si aad ugu jeceshahay !!
sisas waa qoraal weyn laakiin @Perseo wuxuu hagaajiyaa dhibaatooyin yar yar oo toban ah: Kombiyuutarada hal udub leh oo kayar 1 Megas oo RAM ah iyo Kombiyuutarada leh 4 ama kabadan wax kabadan iyo in kabadan 2 Megas oo RAM ah Gigs of RAM.
oo waxaa jira mid ama xiriiriye kale oo xun: midka ah Universal USB Installer.
Way fiicantahay inaad hagaajisid, waan ogahay in booska uu aad u weyn yahay oo currado waana taas sababta aan looga dhaafi karin qaladaadka.
Khaladaadkii la xaliyay, waad ku mahadsantahay macluumaadka. 😉
Oooooooooorale! Waxaan codsanayaa in nalka isla markiiba lagu daro kaas oo ii oggolaanaya inaan dhigo astaan ​​af furan maxaa yeelay waan ahay Layaabay!
Runtu waxay tahay in hagahan uu leeyahay qayb gaar ah.
Felicidades Perseus waana ku mahadsan yahay kun dadaal badan.
Yup hehe ... emoticons Custom waa hawl sugeysa oo aan hayno, Alba mar wuxuu ka yiri fagaaraha laga yaabee inay na caawin doonto HAHAHA.
Oo gabi ahaanba waan ku raacsanahay ... maqaal aad u fiican, runtii ... way is muujisay ... waxay ku gashay barta dhexdeeda albaabka hore (sida ay halkan ku dhahaan) LOL !!!
Mahadsanid sxb, hadhow ma aaminsani doono ama naftayda. XD
Taasi @Perseo waa inay ku qaadatay maalin dhan qoritaanka taas iyo sameynta.
Waa hage weyn haha ​​@Perseo sida aad ujeceshahay ... hadda waa inaad hage u sameysaa mid kasta oo ka mid ah qashin-qubka aad dhigatay. oo sidaas ayaa lagaa dhigay sayidkii fucking haddii aad taas sameyso.
Hahahaha, markaan dhammeeyo dhammaan tilmaamahaas, Ubuntu 12.10 iyo Linux Mint 14 XD ayaa soo bixi doona
Tilmaame aad u wanaagsan, haddii ay taringa ahaan lahayd waxay noqoneysaa boosteejo sare.
Haddii aad rabto, waxaad ku dhejin kartaa Taringa hoosta koontadaada, adoo marwalba xiriinaya cinwaanka maqaalka asalka ah kuna xusaaya Perseo qoraaga 😀
Aad u weyn! ... Hambalyo Perseus, oo ah hage cajiib ah, mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan akhriyay ee aan ku bilaabay adduunkan. Aynu aragno inta isticmaale ee cusub ee lagu dhiirrigelinayo inay adeegsadaan Linux iyada oo la bilaabayo sida tan - hubaal qaar baa kalluumeysan doona ... xD -.
Mar labaad, hambalyo ...
Mid kale? Haha waxaan horey u nahay ukun tifaftireyaal, waxaan jebin karnaa wajiga kuwa doonaya inay na wajahaan kuwa aan nahay oo dhan.
Maqaal xiiso leh oo loogu talagalay dadka bilaabaya, sidoo kale aad u dhameystiran
HAHAHAHA haa, heer sare horey baan u iri ... hehe, miyaad ka walwalsan tahay Courage? ... iyagaa hogaamin doona dhawaan HAHAHA, waanan horey u iri ... waanu abaalmarin doonaa (mustaqbalka, hada ma awoodno haha) qorayaasha ugu fiican 😉
Horay ayaan kuugu sheegay waxa aan u maleeyay abaalmarinta ee chat, adigana waxad igasheegtay EMO, xasuuso odaygii
mmm nope ma xasuusto LOL !!! yup ... taasi waa da'da ... HAHAHAHA
Waxaan raadin doonaa sheekada oo waxaan kuugu soo diri doonaa boostada, wax kasta oo ka badan si aanan u khiyaanayn dadka kale anigoo soo bandhigaya waxyaabaha ku saabsan mawduuca
Waad ku mahadsantahay wax yar ll
Maqaal weyn, oo aadan iloobin wax ku habboon.
Ku jawaab Guti
Waa markii iigu horreysay ee aan arko hage u dhammaystiran sidan, waa wax walba oo aan waligay doonayay inaan ka ogaado Linux ka hor intaanan bilaabin.
Mahadsanidiin @Ozcar iyo @hairosv, sidaas darteed waan gaarnay ujeedka 😀
Perseus, ku soo dhowow barta (maadaama aan kugu dhex akhriyay golaha) oo aan kuugu hambalyeeyo boostada. Waqtigan xaadirka ah kuma mahadcelin doono, laakiin waxaan hubaa in dhawaan aan sameyn doono, maxaa yeelay waxaan isku dayayaa inaan ku qanciyo saaxiibkey inuu u wareego Linux isla markaana waxaan hubaa in qoraalkani ugu dambeyn ka dhaadhicin doono wax walba!
Qoraal culus !!!!
Hambalyo ayaan leeyahay 😉
shaqo aad u fiican… Salaan iyo sanad wanaagsan oo wanaagsan.
Ku jawaab yathedigo
Sannad cusub oo wanaagsan qof walba 😉 Waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga…
Ka yar aniga
Hagaag Perseus ah oo aad ufiican oo sifiican u horumarsan, sidaad usheegtay si aanad u jahwareerin; D
Waqti fiican ku qaad xafladahan 😀
Qoraal aad u wanaagsan, aad u xiiso badan oo dhameystiran.
Way ku fiicantahay tixraaca in GNU / Linux ay jiraan dhowr deegaan oo Desktop ah oo loo isticmaalo, wax aan xitaa lagu riyoonin nidaamyada kale ee hawlgalka.
marwalba hal talaabo kahor waa waxa aan raadinayey, mahadsanid.
Taasi waa waxa aan halkaan u joogno saaxiib;), waa wax lagu farxo inaan halkan kugula nimaadno.
Maqaalka waa wanaagsan yahay, laakiin sida laga soo xigtay http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernelLinux waa farsamo ahaan udub-dhexaadka nidaamyada hawlgalka Unix-like.
Qoraal aad u fiican, tani waa markii iigu horreysay ee aan wax ka akhriyo Linux-ga oo waxaan u arkay wax weyn. Waxa aan ugu jeclahay waa inay lacag la’aan tahay, waan ka daalay inaan boqolaal yuuro ku kharash gareeyo barnaamijka softiweerka ah.Waan isku dayi doonaa waana ku mahadin doonaa, markaan goor dambe wax barto oo aan ku caawin karo, waan sameyn doonaa
Waad mahadsantahay kuna soo dhawow goobta 😀
Waxaa jira qaybo badan oo tilmaan-bixiyahan ah, taas oo ah, sii wadista halka lagu sharxayo ee ku saabsan codsiyada, deegaanka desktop, iwm., Waxaan kugula talinayaa inaad akhrido 😉
Salaan waadna ogtahay ... waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno 🙂
Aad baad ugu mahadsantahay tusahan, waxaan rakibay xubuntu, waxaanan dareemayaa inay si yaab leh aniga iila shaqeyso, runtii, hadaanay ahayn wax ku darsigaaga, la iima dhiirigelin doono waana lagugu leeyahay, waxaan rajeynayaa inaan ogaado waxbadan oo ku saabsan qoraaladaada, mahadsanid
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, ku soo aruuri faahfaahinta internetka laakiin tani waa mid aad u cad oo nidaamsan.
Weyn, aad baad ugu mahadsantahay sharraxaaddaada. 🙂
Waad xirtay, boosteejo aad u fiican. Hadaad ahaan laheyd Messi xagasha.
aad baad ugu mahadsantahay faahfaahinta
Ku jawaab qaysar 316
Darawallada Android ayaa lagu dari doonaa Linux 3.3 kernel